Bekuqhude Manikiniki Kwindumezulu Yomcimbi Obuhlelwe ama Innovators NPO. | News24
Bekuqhude Manikiniki Kwindumezulu Yomcimbi Obuhlelwe ama Innovators NPO.
ISITHOMBE SITHUNYELWEIzinhlaka zikaHulumeni kanye no taxi driver associations, singabalula Umzumbe taxi drivers association, Umthwalume taxi drivers association, Umzumbe municipality, Ray Nkonyeni Traffic police, 11 real stars kanye noMsinsini SAPS.
ENDAWENI yaseMzumbe esigodini sakwaHlongwa KwaSangweni Sport ground, bekunendumezulu yomcimbi wokugubha inyanga yezokuthutha phecelezi Transport month.
Mhlaka 28 October 2018, beziqhuthana amazenze ngebhola likanobhujuzwayo izinhlaka zikaHulumeni kanye nenhlangano yabashayeli iSingabalula Umzumbe n, UMthwalume, UMzumbe Municipality, Ray Nkonyeni Amaphoyisa Omgwaqo, 11 Real Stars kanye noMsinsini SAPS.
I-Innovators ididiyele lemidlalo ngenhloso yokugubha inyanga yezokuthutha, nokukhumbuza abasebenzisi bomgwaqo ukuthi abashayele ngokucophelela futhi bahloniphe nemithetho yemigwaqo kwazise phela isikhathi sokungcebeleka sesikeduze(festive season). UMnyango WezokuThutha udlulise umyalezo ngezokuphepha emigaqweni ngokunika izethameli amaphepha anemigomo nemibandela ngezokuphepha emigwaqeni eyexwayisa ngokuningi. Lemidlalo ibixhaswe UMzumbe Municipality (youth development office) ngemikomelo etholwa ilabo abanqobile. U-AVBOB udlale enkulu indima yokuxhasa abadlali ngamanzi kwazise belikhipha umkhovu etsheni.
Lomcimbi ube impumelelo ngoba amaqembu adlale ngokukhulu ukuzimisela futhi nomphakathi waseMzumbe ubukade uphume inqina uyozibonela kudlalwa. Inhlangano yabashayeli, UMzumbe ibhule amazolo ekuseni kwi-tournament wahlula uMsinsini SAPS sebeshaya amaphenathi ngamagoli amane kwamabili (4-2).UMsinsini SAPS ubungabambeki ngoba ubudla fumuki udle silazi, ugcine ufinyelele emdlalweni wamanqamu noMthwalume taxi drivers lapho bamane baziphuzela kalula nje ngamagoli ayisihlanu kwelingekho (5-0).
I-Innovators izimisele ngokuqhubeka yenze imicimbi njengoba ibingaqali nge (Safety on our roads event). kuwona lonyaka Ka 2018. I-Innovators yenze indumezulu yomcimbi wokugubha inyanga yabasha 16 June ( Voicing out event ) lapho izikole eziyisihlanu zaseMzumbe Circuit zaziqhudelana ngeNkulumo Mpikiswano kanye nokubizwa kwamagama (Spelling B). Izingane ezinqobile zazikomeliswa ngama Samsung Galaxy tablet. I-Innovators isinohlelo lokuthi lemicimbi kube eyasendaweni yase Mzumbe minyaka yonke ngoba ithuthukisa umphakathi uthi iyafundisa izingane zesikole futhi iphinde ixwayise ngezokuphepha emigwaqeni.